"Ciqaab Ka Adag Tii Cabdi Iley Ayaanu Marin Doonaa Mustafe Haddii Ay Ku Caddaato" - Ra'iisal Wasaare Abey Ahmed Oo Ka Hadlay Khilaafka DDS & Guddi Uu Soo Diray - Jigjiga Online
HomeSomalida“Ciqaab Ka Adag Tii Cabdi Iley Ayaanu Marin Doonaa Mustafe Haddii Ay Ku Caddaato” – Ra’iisal Wasaare Abey Ahmed Oo Ka Hadlay Khilaafka DDS & Guddi Uu Soo Diray
“Ciqaab Ka Adag Tii Cabdi Iley Ayaanu Marin Doonaa Mustafe Haddii Ay Ku Caddaato” – Ra’iisal Wasaare Abey Ahmed Oo Ka Hadlay Khilaafka DDS & Guddi Uu Soo Diray
Addis Ababa (JO) – Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya ayaa si adag uga hadlay khilaafka ka taagan deegaanka Soomaalida, waxaanu ballan-qaaday in ciqaab adag la marin doono Madaxweyne Mustafe haddii ay ku caddaadaan falalkii lagula kacay Xildhibaannada baarlamaanka ee toddobaadkan xad-gudubyada loogu geystay magaalada Jigjiga, musuqmaasuqa iyo dhacdooyinka kale ee laga sheegayo inay deegaanka ka jiraan.
Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed waxa uu si cad u sheegay in Madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida, Cabdi Ilay uu ku jiro xabsi muddo laba sannadood ah oo uu marayo ciqaabta dembiyadii uu ka galay dalka Itoobiya iyo shacabkiisa muddadii uu xilka hayey, laakiin Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar uu mari doono ciqaab kasii xun middaas haddii ay ku caddaadaan dembiyadu.
Abiy Ahmed oo la dardaarmayay guddi baadhitaanno ku samaysa arrimaha ka dhacaya deegaanka Soomaalida oo isugu jira Sirdoon, Xeer Ilaalinta dalka iyo xubno Xisbiga Barwaaqo ka tirsan oo ay horraantoodii magaalada Jigjiga soo gaadheen gellinkii dambe ee maalintii Jimcaha ayaa waxa uu carrabka ku adkeeyey in xisbiga ay sumcad xumo weyn usoo jiidday waxyaabaha laga sheegayo Deegaanka Soomaalida ee muuqaalladooda baraha bulshada lagu baahiyey.
“Muuqaalladaas aad arkaysaan waxa lagu sheegayaa inay yihiin xubnihii Baaralamaanka Deegaankaas. Bal si fiican u daawada.” Ayuu yidhi Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed oo la hadlayay Sirdoonka, Xeer-ilaalinta iyo xubnaha xisbiga Barwaaqo ee uu usoo diray Deegaanka Soomaalida, sida ay Jigjiga Online u sheegeen xubnaha lasoo diray qaarkood.
“Waxani meel ka dhac ayay ku yihiin sharciga iyo dalkaba. Waxay ceeb ku yihiin xisbigeenna.” Ayuu Abiy Ahmed ku daray.
Ra’iisal Wasaaraha oo gellinkii hore ee maalintii Jimcaha la kulmay, waxa kale oo uu yidhi: “Gobolkan hadalkiisu wuu igu batay, musuq badan iyo sharciga oo intii ugu sarraysay ku tumanayso ayaa ina soo gaadhaya. Idinku baxa, hawshiinana si fiican u qabsada.”
“Waxaad la socotaan wixii uu sameeyey Cabdi Ilay iyo inuu hadda ciqaabteeda marayo. Halkii uun bay haddana ku socdaan kuwani. Waxaan idiin ballan-qaadayaa in haddii aad caddaymo buuxa keentaan, in aan ciqaab kasii xun midda kan hore aan marsiino.” Ayuu raaciyey.
Dr. Abiy Ahmed waxa kale oo uu xubnahan u sheegay in baadhitaanka ay samaynayaan ay u maraan qaab xeeladaysan, farsamooyin sarreeyana ay isticmaalaan iyagoo waraysiyo ka qaadaya dhibbaneyaasha, xubnaha Baarlamaanka ee labadii dhinac ee qaarkood xasaanadda laga qaaday, qaarna laga reebay.
“Waxa la sheegayaa in lacago laaluush ah la bixiyey, soo caddeeya. Xubnaha waxyeellada la gaadhsiiyey waraysiyo kasoo qaada, kuwan farta lagu fiiqayo xog buuxda ka keena. Afhayeenka baarlamaanku waa xuddunta xogta aad u baahan tihiine si taxaddar leh uga soo saara wax kasta oo muhiim ah.”
Jigjiga Online waxa kale oo ay ogaatay in xubnaha guddida Ra’iisal Wasaaruhu soo diray ay qaarkood ku sugan yihiin magaalada Jigjiga oo ay Sabtidii maanta si hoose ula kulmeen qaar ka mid ah xildhibaannada dhibaatadu gaadhay iyo dhallinyaradii la xidhay ee lacagta lagu sii daayey.
Qabtay hore ee guddida ee sida qarsoodiga ah hawlaha xaqooqo-raarinta ugu jooga Jigjiga, waxa xigaya hormo kale oo toddobaadkan imanaya iyagoo aan is-qarinaynin, isla markaana xubnaha baarlamaanka, komishaneerada booliska, ciidanka gaarka ah iyo xukuumaddaba baadhitaan ku samaynay.
Dhinaca kale, Safaaradda Maraykanka ayaa waxay xidhiidh la samaysay Wasaaradda Arrimaha dibedda ee Itoobiya, waxaanay u sheegtay inay walaac ka qabto xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha ugu dambeeyey ee dhacayay.
Safaaradda Maraykanku waxay u sheegtay Itoobiya in xad-gudubyo badan oo khatar ku ah xuquuqda binu-aadamka, xorriyadda hadalka iyo muwaadiniinteeda ku sugan gudaha Itoobiya ay soo gaadhayaan, iyagoo soo qaatay dhacdooyinkii deegaanka Soomaalida.
Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar oo hore u qirtay in saddex jeer loo sheegay inuu is-casilo, ayaa waxay arrintani ku keenaysaa dhibaato kale, waxaana la saadaalinayaa in mustaqbalkiisa xafiisku uu ku koobnaan doono inta baadhitaanka guddidu ay dhamaysanayaan.
Qirashadii Madaxweyne Mustafe ku caddeeyey in la amray inuu is casilo, halkan ka akhriso: